Ha ku Faanin Aqoontaada !! - Galmada.net
sheeko cajiib ah:
Markab Nooca dalxiiska ah ayaa waxa saarnaa nin professor ah, waxana isaga oo badda eegaya soo Ag Istaagay mid ka mid ah shaqaalaha markabka ee qaybta makaanikada ah Ninkaas oo dhar wasakh ah xidhnaa.
Professorkii waxa uu ninkii makaaniga ahaa ku yidhi isaga oo Xaqiraya “ Wax ma Baratay Oo Magacaaga ma qori kartaa ?.
Waxa uu Ninkii Makaaniga ahaa ugu jawaabay “Maya,wax ma baran magacaygana ma qori karo”.
Professorkii inta uu Qoslay ayaa waxa uu ku yidhi “ Sorry Haddaa Wax qiimo ah noloshaadu ma leh Cimrigaagiina kala badh ayaad Cuntay ”.
Ninkii Makaanigii wax jawaab ah umuu Celin ee waa uu iska Aamusay.
Daqiiqdo kadib ayaa ay Mawjadihii baddu si ba’an u kaceen Oo Markabkii ay Kusoo fataheen. Markaas ayaa Uu Ninkii Makaaniga ahaa waxa uu weydiiyay Professorkii “weligaa bad ma gashay oo Dabbaasha ma taqaan?.
Professorkii Oo Naxsan ayaa waxa uu ku jawaabay ” maya Ma aqaanno Dabaal”.
Ninkii Makaaniga ahaa ayaa Professorkii ku yidhi “ Waan ka xumahay Waayo noloshaada oo dhammi waa khasaare Cimrigaagii oo dhanna waa aad Cuntay Mar haddii aanad dabbaasha aqoon, taas oo aad maanta ku badbaadi lahayd”
Hadii Aad Aqoontaadu ku Cajibaso Ha ismoodin Inaad waxwalba aad taqaano ha uguna fanaanin Asaaga hadiin kale waxaad aad helaysaa dhaxalkeeda.
By Zayed Mohamed Darwiishka.